As of Fri, 18 Oct, 2019 12:55
सम्मेलनमा अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, काजाकिस्तान, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, भुटान, चीन र भारतलगायतका देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ ।
इन्टरनेसनल कनफ्रेन्स एन्ड राउन्ड टेबल अन फाइनान्ससिएल कन्जुमर प्रोटेक्सन एन्ड एजुकेसन इन एसिया प्यासिफिक’ नामक अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन यही असार १७ र १८ गते हुने बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ठनाथ पौडेलले वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय साक्षरतामा विज्ञता हासिल गरेका १ सय २५ स्वदेशी तथा विदेशी सम्मेलनमा सहभागी जनाउने बताए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा विभिन्न सत्रसहितको राउन्ड टेबलसमेत हुनेछ । कार्यक्रमले बोर्डसहित नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्ने क्षमता प्रदर्शन हुने बोर्डका अध्यक्ष डा. रेबतबहादुर कार्कीले बताए । साथै वित्तीय साक्षरता तथा लगानीकर्ताको संरक्षणका विविध आयामहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने रहने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, काजाकिस्तान, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, भुटान, चीन र भारतलगायतका देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ । योसँगै सम्बन्धित संस्थाहरू ओइसीडी, सेवी, एसआइसीलगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाको समेत सहभागिता रहने छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैक, बिमा समिति, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बजार, बैकर्स एसोसिएसन र लगानीकर्ता संघहरूको समेत सहभागिता रहने बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले जनवरी २०१९ बाट ओइसीडीको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेको हो । ओइसीडीले विश्वमा मानव जीवनको समृद्धिका लागि असल तथा प्रभावकारी नीति बनाउन पहल गर्छ । यसको मूल उद्देश्य भनेको समृद्धि समानता र अवसरको निर्माण गर्नु हो । यो संस्था विगत ६० वर्षदेखि क्रियाशील छ । यसमा ६४ देशका ८६ संस्थाहरू पूर्ण सदस्य र ९६ देशका १७२ संस्थाहरू नियमित सदस्यका रूपमा आवद्ध छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीले बोर्डको रजत जयन्ती स्मारिका सिक्कासमेत लोकार्पण गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आफ्नो स्थापनाको रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा बोर्डको रजत जयन्ती लोगो अंकित हुलाक टिकट तथा रजतजयन्ती स्मारिका सिक्का प्रकाशन गरेको छ । यसै क्रममा रजतजयन्तीको उपलक्ष्यमा बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, टक्सार महाशाखाले २९ मिमी डायमिटरको ८.५ ग्रामतौल भएको कुप्रो निकेल धातुको १०० दरको सिक्का निष्काशन गरेको हो ।